BURLEY Tools, natsangana tamin'ny 2006, dia namokatra sy namokatra fitaovana elektrika nandritra ny folo taona mahery tany Chine. Miaraka amin'ny traikefa amin'ny fanondranana any EU, Amerika, Aostralia, Moyen Orient ary Azia atsimo atsinanana miaraka amina vokatra namboarina, semiprofessional, matihanina, dia mpanamboatra fitaovana famatsiana herinaratra any Chine ankehitriny izahay.
Fantaro bebe kokoa ny orinasanay amin'ny alàlan'ny VR
hetsika lehibe amin'ny fampandrosoana ny marika
Niorina tamin'ny fomba ofisialy ny Burley Tools. Ary lehibe amin'ny famolavolana sy fanamboarana motera ho an'ny fitaovana elektrika.
Ny Burley Tools dia manomboka mamolavola sy manamboatra fitaovan'ny herinaratra, misy ginder zoro, tsofa chop, polisera ary basy hafanana, fanazaran-tena misy fiatraikany.
Mampivoatra am-pahombiazana andiana mixers sy mixer paddle, indrindra hiantohana ny tsenan'ny EU sy Amerika.
Famolavolana sy fanamboarana SANDERS DRYWALL.
Mifindra any amin'ny ozinina vaovao miaraka amin'ny haben'ny zavamaniry 7000m2. Manangana fizarana ivelan'ny loharano manokana.
Fiaraha-miasa tonga amin'ireo marika fanta-daza sy mpitarika mpivarotra. Ny fampitomboana ny vokatra dia misy amin'ny fanavaozana ny trano sy ny fananganana faritra.
Ampitomboy ny ozinina vaovao, ary manomboka ampiasaina ny laboratoara fitiliana 500m2 anay.
Tohizo ny filaharan'ny famokarana vokatra; TRANOVAO vaovao hahatratrarana ny fahafaha-mamokatra.
Ampitaina amin'ny tsipika fivoriambe 19 sy ny fahaizan'ny famokarana 400000 pcs. Fitaovana mandeha ho azy bebe kokoa no ampiasaina amin'ny tsipika fivoriambe.
Atrikasa tsindrona plastika
Manana mpiasa mahay izahay, ekipa mpamolavola traikefa manan-karena ary QC tompon'andraikitra.
Atrikasa fanodinana Machining
Fitaovana milina CNT 15+ sy felana fanaraha-maso nomerika 24+. 230000 napetraka isam-bolana.
Miaraka amin'ny fahalalana ny motera nanomboka tamin'ny taona 1996. andalana rotor 7 ary tsipika stator 5 isam-bolana.
Trano fitehirizam-bokatra 20000㎡ miaraka amin'ny fahafahan'ny entana 150000pcs ho an'ny vokatra vita.
Sambo 100000pcs isam-bolana, 150000 no mametraka moto tsy fahita isam-bolana ho an'ny vokatra fototra, singa 10000 manapaka faritra tsy misy fenitra isam-bolana.
Ny laboratoara fitiliana 500㎡ dia mahavita manao fiakaran'ny maripana EMC ROHS fanandramana fitakiana ireo potika plastika sns ..,